Somalida ku nool Magaalada Nairobi oo Saamayn wayn ay ku yeelatay Dhicii loo Gaystay Shirkadda Xawaaladda ee Dalsan.
Canab max'ud "mumtaz" | canabmumtaz@hotmail.com
Tuugo Hubaysan oo Lixdan Kun oo Doolar ($60,000) Ka Dhacay Xafiiska Shirkada Dalsan ee Nairobi
Waxaa la diley mid ahaa waardiyayaasha Masaajidka Jamia Musque, " Shiikh Nuur Ibraahim" Allaha u naxariisto
Dhacii loo gaystay shirkada Xawaalada Dalsan ayaa saamayn wayn ku yeeshay dadka ku nool magaalada Nairobi iyo meelo kaleba si wayna ugu tiirsanaa xawaaladaas.iyagoo ka qaadan jiray lacagaha ay eheladoodu uga soo diraan dibadaha xiligana ay tahay markii ay u soo doonan jireen biilalka.
Maanta mar aan booqday suuqyada ganacsiga ee somalida iyo xafiiska Dalsan ee islii ayay dadku si wayn u hadal hayeen dhacaas loo gaystay xawaaladda.iyagoo u aanaynaya in ay ka dambayso amaan xumo; iyadoo baryahaan dambe ay aad usoo badanayaan tuugada dhaca u gaysata goobaha waawayn ee ay soomalidu ku ganacsato; iyadoo aysan jirin cid daba gal ku samaysa tuugadu marka ay dhacyadaas gaystaan.
Xawaalada Dalsan kuma koobna oo kaliya lacagaha la isku diro ee caadiga ah balse waxaa u dheer oo dhigta lacago dad ganacsato ah iyo kuwo kale oo ku kaysada lacagahooda waxayan dadka u fududeysaa isku gudbinta lagacaha.waxaa kale oo ay qayb wayn ka qaadataa ganacsatu marka ay u safrayaan magalo kale in sii dhigtaan si ay xafiisyada kale ee dalka ay u socdaan uga qaataan.
Xawaaladaha guud ahaan waa kuwo ka haqab tiray dadka soomaaliyeed ee ay haleeshay Dowladda la'aantu in ay u buuxiyaan booskii bangiyadda una fududeeyay sidii ay iskugu dhaafsan lahaayeen lacagahooda iyagoo kala jooga qaarado kala duwan. waxayna ka mid yihiin Ha'adaha gaarka loo leeyahay kuwooda baahidii ay bulshadu ka qabeen daboolay dadkuna ay abaal wayn u hayaan.
Xafiiska xawaalada ee ku yaala magaalada Nairobi ayay tuugadaas dhaceen habeen hore iyadoo ay shaqaaluhuna ka maqnayen xiligaas oo ahayd maalin jimce ah habeenkii sabtidu soo galaysay tuugadda ayaa dil u gaystay mid ka mid haa waardiyayaasha masjidka Jamia Musque, Sh Nuur ibraahim (Allaha u naxariisto). lacagta ayaa lagu sheegay Lixdan Kun oo Doolar ($60,000). Booliiska ayaa sheegay in ay ku raad joogaan tuugadaas ayna lagacaaasi helidoonan.
War saxaafadeed SomaliTalk ka soo gaarey Xaafiika Dalsan Nairobi ayaa u qoraa sidan:
Waxaan jeclahay inaan iniika waramo wixii ka dhacay Xaafiika Dalsan Nairobi, si aynaan u qaadan warar aan la hubin.
Habaynkii Jumcada ee taarikhdu ahayd 2/7/2004. ayaa tuug hubaysan u soo dhacaday xaafiiska Dalsan International ee town-ka Nairobi. Habaynkaas lama shaqaynayn oo waxay ahayd Jumce, shaqaaluhuna ma joogin.
Waxay xabbad ku dileen tuugtu nin ka mid ahaa waardiyayaasha Masaajidka Jamia Musque, " Shiikh Nuur Ibraahim" Allaha u naxariisto.
Waxay galeen xaafiiska Dalsan, waxay ka qaateen lacag $60000.( lixdan kun oo doolar ah).
Computerdii iyo Datadii shirkada wax gaaray ma jiraan. Isla habaynkii Sabtida shaqadu caadi ayay u socotay. Police- kenya waxay sheegeen inay ku rajo wayn yihiin inay helaan tuugtaas.
Shiikh Abdiraxmaan Maxamed Jibriil.